Frequently Asked Questions About Oral Sex – My Doctor
Frequently Asked Questions About Oral Sex
ပါးစပ်ဖြင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းဟာ ပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံခြင်းအစား (သို့မဟုတ်) ပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမတိုင်မီ လိင်စိတ်နှိုးဆွသောအနေဖြင့်လည်းကောင်း ပြုလုပ်တတ်တဲ့အရာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
ကျန်းမာရေးရှုထောင့်မှနေ၍ အရွယ်ရောက်ပြီးလူတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ အမေးများသော မေးခွန်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
မေး : ပါးစပ်နဲ့လိင်ဆက်ဆံခြင်းဟာ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ပါလား?
ဖြေ : မရနိုင်ပါ။
မေး : အမျိုးသားရဲ့သုတ်ရည်ကို အမျိုးသမီးက မြိုချလိုက်မယ်ဆိုရင်ရော ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ပါသလား?
ဖြေ : မရနိုင်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ပါးစပ်ကမြိုချလိုက်တဲ့သုတ်ရည်နဲ့(သုတ်ရည်မှာပါဝင်တဲ့)သုတ်ပိုးတွေဟာ အစာအိမ်ထဲကိုရောက်ပြီး အစာချေအက်ဆစ်ကြောင့်သေကြေပျက်စီးပြီး အစာဟောင်းတွေနဲ့အတူ မစင်အဖြစ်စွန့်ပစ်ခြင်းခံရလို့ပါ။ (သုတ်ပိုးဟာ သားအိမ်ထဲမှ မမျိုးဥနဲ့တွေ့ပြီး သန္ဓေအောင်မှသာလျှင် ကိုယ်ဝန်ရမှာပါ။)
မေး: ပါးစပ်နဲ့လိင်ဆက်ဆံရင် အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီ (HIV) ၊ အေအိုင်ဒီအက်စ် (AIDS) မကူးနိုင်ဘူးပေါ့နော်?
ဖြေ: ဒီအယူအဆဟာ လုံးဝမှားပါတယ်။ ပါးစပ်နဲ့လိင်ဆက်ဆံခြင်းဟာ ပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံသူတွေလိုပဲ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီ (HIV) ၊ အေအိုင်ဒီအက်စ် (AIDS) အပါအဝင် အခြားသော လိင်မှကူးစက်တတ်တဲ့ ရောဂါပိုးမှန်သမျှ အကုန်ကူးနိုင်ပါတယ်။
ဖြေ : ကူးစက်နိုင်တဲ့ရောဂါပိုးတွေကတော့….
(4)အသည်းရောင်အသားဝါ A ပိုး
(5)အသည်းရောင်အသားဝါ B ပိုး
(6)အသည်းရောင်အသားဝါ C ပိုး
(8)ကလမ်မိုင်းဒီးယား (Clamydia) အပါအဝင်
မေး: အပေါ်ကပြောတဲ့ရောဂါတွေက ပါးစပ်နဲ့ပြုလုပ်ပေးတဲ့သူက ကူးမှာလား? ပြုလုပ်ခံရတဲ့သူကကူးမှာလား?
ဖြေ:ပါးစပ်ကိုအသုံးပြုပြီးလုပ်ပေးတဲ့သူက ကူးစက်နိုင်ချေပိုများပါတယ်။ လိင်အင်္ဂါကထွက်တဲ့ အရည်တွေ(သုတ်ရည်၊ ရှေ့ပြေးအရည်ကြည်) ထဲကတဆင့် ကူးစက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ပြုလုပ်ခံသူမှာလည်း ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
မေး: ဘယ်လိုအခြေအနေတွေမှာ ကူးနိုင်ချေပိုများလဲ?
ဖြေ: ပါးစပ်ထဲမှာ အနာ၊ ဒဏ်ရာ၊ အပေါက်အပြဲရှိနေရင် ကူးနိုင်ချေပိုများပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပါးစပ်နဲ့လိင်မဆက်ဆံမီ သွားတိုက်ခြင်းမပြုလုပ်သင့်ပါဘူး။ မဖြစ်မနေ ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ခံတွင်းသန့်ရှင်းဆေးရည်တွေကို အသုံးပြုတာပိုသင့်လျော်ပါတယ်။
မေး: ဒီရောဂါတွေမကူးအောင် ဘယ်လိုလုပ်သင့်လဲ?
ဖြေ: ကွန်ဒုံးစွပ်ပြီးမှ ပါးစပ်နဲ့ဆက်ဆံတာဟာ ရောဂါကူးစက်မှုကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
အခြားသိလိုသောမေးခွန်းများကို My Doctor Chat Box မှတစ်ဆင့် မေးမြန်းဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
Admin	2019-01-09T22:08:44+00:00	January 13th, 2018|Categories: All Articles, မျိုးဆက်ပွါးကျန်းမာရေး|2 Comments
ကိုအောင် January 13, 2018 at 10:21 pm - Reply
ass ထဲကို သုတ်ရည်ထည့် ရင်ကော ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ပါသလား ဆရာ
admin2 January 20, 2018 at 11:20 am - Reply